थाई फुडका लागि हिम थाई | .:: Welcome || Paryatannews
Home » प्रोफाइल » थाई फुडका लागि हिम थाई
थाई फुडका लागि हिम थाई
खानामा स्वाद मात्रै होइन, सँस्कृति पनि जोडिन्छ । नेपाली, चाइनीज, इन्डियन जस्तै थाई खानाको आफ्नै महत्व छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौँमा पनि थाई खाना लोकप्रिय बन्दै आएको छ । खानाका लागि होटल जानेहरू अक्सर फरक स्वाद लिन चाहन्छन् । तपाईँ पनि स्वाद फेर्न चाहनुहुन्छ भने, जावलाखेलस्थित हिम थाई होटल राम्रो रोजाई बन्नसक्छ ।
जहाँ १८ भन्दा बढि किसिमका थाई परिकारको स्वाद चाख्न सकिन्छ । थाई खाना पाइने होटल सहरमा अरू पनि केही छन् । तर, २५ वर्षदेखि काठमाडौंमा सञ्चालित हिम थाईको नयाँपन के छ भने यहाँ बन्ने सबै परिकार थाईल्याण्डबाटै आयात गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा, थाईल्याण्डमा पाइने वास्तविक स्वाद चाख्न पाइने सञ्चालक मधु केसी बताउँछन् । स्वादका धेरै पारखीहरू लाजिम्पाटमा रहेको हिम थाईसँग परिचित छन् । हो, त्यही रेष्टुरेण्ट हिम थाई अब जावलाखेलमा उपलब्ध छ । हिम थाई भित्र छिर्नेहरूले सरल र शान्त वातावरणको अनुभुति गर्न सक्छन् । जहाँ वास्तविक पारिवारिक माहोल छ । पूर्णतः थाई खानालाई नेपाली करण गरि मसलेदार बनाउने भएकोले नेपालीहरूले पनि मन पराउने केसीको भनाइ छ ।
लाजिम्पाटबाट जावलाखेल सरेपछि रेष्टुरेण्टले आफ्ना खानामा थप विविधता ल्याएको सञ्चालक केसी बताउँछन् । अब यहाँ थाई फुड बाहेक इण्डियन, चाईनीज र कन्टिनेन्टल खानाका अझ विशेष परिकारहरूको सेवा पनि उपलब्ध छ । यस्तै, हिम थाई रेष्टुरेण्ट देशी तथा विदेशी मदिराको स्वाद लिन चाहनेको लागि पनि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ । ग्राहकहरूको सेवाको लागि बर्थडे पार्टी, विवाहको पार्टी, सेमिनार हल, ग्राहकको अनुरोधमा साँस्कृतिक कार्यक्रम र लन्ज बक्स प्यााकिङमा समेत सेवा दिने गरेको छ हिम थाईले ।
हिम थाई रेष्टुरेण्ट सम्भवतः नेपालमै फरक पहिचान बोकेको रेष्टुरेण्ट हो । चिकेन र नरिवल मिश्रित टोम खा काई, थाई माछाको कुङ फाट बाइ क्राप्राओ, गंगाटोको मासु र फ्राई खानाको खाओ फाट पु, बार्वीक्यू, कुखुराको मासुको काई योङ, चिकेन ग्रीन करी, काईङ खीआयो वाङ काई, तातो तथा अमिलो गंगाटोको मासु मिश्रित टोम याम कुङ खाना यहाँ पाइन्छ । फाटोङ, डुरियन, माछाको सस जस्ता परिकार ग्राहकको रोजाईमा पर्छन् । फलफूलका पारखीमाझ म्याङ्गोस्टन ज्याकफ्रुट, याम थाले, मेवाको सोम ताम, खाओ फाट आदि औधी रुचाइन्छन् । यस्तै, नौला परिकारहरू रहेकै कारण हिम थाई लोकप्रिय छ ।
जहाँ १८ भन्दा बढि किसिमका थाई परिकारको स्वाद चाख्न सकिन्छ । थाई खाना पाइने होटल सहरमा अरू पनि केही छन् । तर, २५ वर्षदेखि काठमाडौंमा सञ्चालित हिम थाईको नयाँपन के छ भने यहाँ बन्ने सबै परिकार थाईल्याण्डबाटै आयात गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा, थाईल्याण्डमा पाइने वास्तविक स्वाद चाख्न पाइने सञ्चालक मधु केसी बताउँछन् । स्वादका धेरै पारखीहरू लाजिम्पाटमा रहेको हिम थाईसँग परिचित छन् ।
हो, त्यही रेष्टुरेण्ट हिम थाई अब जावलाखेलमा उपलब्ध छ । हिम थाई भित्र छिर्नेहरूले सरल र शान्त वातावरणको अनुभुति गर्न सक्छन् । जहाँ वास्तविक पारिवारिक माहोल छ । पूर्णतः थाई खानालाई नेपाली करण गरि मसलेदार बनाउने भएकोले नेपालीहरूले पनि मन पराउने केसीको भनाइ छ ।
थाई फुडका लागि हिम थाई Reviewed by Reporter Paryatannews on Aug 28 . खानामा स्वाद मात्रै होइन, सँस्कृति पनि जोडिन्छ । नेपाली, चाइनीज, इन्डियन जस्तै थाई खानाको आफ्नै महत्व छ । पछिल्लो समय काठमाडौँमा पनि थाई खाना लोकप्रिय बन्दै आएक खानामा स्वाद मात्रै होइन, सँस्कृति पनि जोडिन्छ । नेपाली, चाइनीज, इन्डियन जस्तै थाई खानाको आफ्नै महत्व छ । पछिल्लो समय काठमाडौँमा पनि थाई खाना लोकप्रिय बन्दै आएक Rating: 0